PressReader - Isolezwe: 2018-06-15 - Intsha ayifundele amakhono - Dumisa
Intsha ayifundele amakhono - Dumisa
KUSASA, iNingizimu Afrika izobe igubha usuku oluthinta abaningi kuleli, uSuku lweNtsha. Ngokomlando uJuni 16 waba wusuku olubalulekile ngo-1976 eSoweto lapho kwabhikisha khona izinkulungwane zabantu abasha begqoke imifaniswano yabo yezikole belwisana nokufundiswa nge-Afrikaans ezikoleni. Kwabhikisha abafundi ababalelwa ku-20 000.
Ngokwezibalo ezivela kwaSA History kwabulawa abafundi ababalelwa ku-176 kulo mbhikisho. Omunye walabo bafundi kwaba nguHector Pieterson (13), isithombe sakhe esasabalala umhlaba wonke esezingalweni zikaMbuyisa Makhubu owayeneminyaka engu18 ngaleso sikhathi.
Lesi sithombe sathathwa uMnuz Sam Nzima, odlule emhlabeni nonyaka.
Kubafundi ababoshwa ngaleso sikhathi kubalwa nesazi sezomnotho nezepolitiki kuleli, uSolwazi uBonke Dumisa. UDumisa waboshwa ngoJuni 28, 1976 waze waphuma ejele ngoJulayi 28 ngo-1977.
Engxoweni neSolezwe ngokubaluleka kwalolu suku, uthe kuyamjabulisa ukubona ukuthi ukuzinikela kwabo kusathela izithelo. “Kuyangijabulisa ukubona sivuna izithelo ezinhle ngokuzinikela kwethu ngaleso sikhathi. Kwaba yisikhathi esinzima kimina ukuba sejele isikhathi esingaka kodwa ngangiqonda esasikulwela ukuthi kubalulekile.”
Ngemuva kokuphuma ejele uDumisa akazithelanga ngabandayo kwezemfundo njengoba namhlanje eneziqu ezihlukene okubalwa kuzo nezeMasters of Laws (LLM).
Ngendlela ecishe ifane no-1976, eminyakeni edlule izitshudeni zakuleli beziyigxoba ngaphansi kwesiqubulo esithi #FeesMustFall, befuna imfundo yamahhala ezikhungweni zemfundo ephakeme. Lokhu kuholele ekutheni owayengumengameli kuleli uMnuz Jacob Zuma ngoDisemba nyakenye amemezele imfundo yamahhala kuleli, waveza nokuthi izovivinywa eminyakeni emihlanu kusukela nonyaka.
Abaningi basithakasela lesi simemezelo, nokho uDumisa uthe asiguqulanga okuningi. “Ngokubona kwami kwenziwa isimemezelo ngento ebesivele ikhona futhi yangabe isalandelelwa. Izikhungo zemfundo ephakeme besezivele zizama ukwamukela izitshudeni ezivela emakhaya ahlwempu ngohlelo lweNSFAS, umehluko ukuthi sebamukela nzivela emakhaya aphila ngemali engaphansi kukaR600 000 ngonyaka. Kodwa into ebalulekile kakhulu wukuthi nalezo zitshudeni kumele zigqugquzelwe ukuthi ziphase kahle uGrade 12 ukuze bezothola amaphuzu anele ukwena izifundo ezinamathuba omsebenzi.”
UDumisa uthe intsha kumele igqugquzelwe ukuthi ifundele ukungena emkhakheni wamakhono ashodayo kuleli ukuze ihlomule kahle. “Sesikhathele ukugqokisa izingane zethu amajazi amnyama bese ziyohlala emakhaya zingawutholi umsebenzi. Ukuze zihlomule kahle ngemfundo ephakeme kumele zingene emkhakheni enamakhono adingekayo emnothweni wakuleli.”
ISAZI sezomnotho, ipolitiki nezomthetho kuleli uSolwazi uBonke Dumisa esaboshwa ngesikhathi kubhikisha abafundi belwa nokufundiswa ngolimi lwesiBhunu ngoJuni 16, ngonyaka ka-1976